NEZVEDU ▼ ︎
BHAIBHERI ▼ ︎
Murume Nomukadzi uye Mwana
Demokarasi Ndiyo Kuzvitonga
Mason and Symbols
Nguva Nevamwe Shamwari
RONGA ▼ ︎
Tsvaga Izwi reShoko Foundation
Tsvaga manyorerwo kubva kuIzwi magazini
Iyo Yokuzvipira Nyaya uye Kuzvipira Kwomweya hakugoni kuonana. Mumwe wevaviri anofanira kupera; hapana nzvimbo yevari vaviri.
Maiwe, nhamo, kuti vanhu vose vawane Alaya, vave mumwe neMweya Mukuru, uye kuti, kana uine iyo, Alaya inofanira kuvabatsira zvikuru!
Tarisai sei kufanana nemwedzi, unoonekwa mumagwenga akajeka, Alaya inoratidzwa nediki uye neyakakura, inoratidzwa muatomu madiki, asi inokundikana kusvika pamwoyo wevose. Hazvina maturo kuti vashomanana vakadaro vanofanira kubatsirwa nechipo, kukosha kwekukosha kwekudzidza chokwadi, kunzwisisa kwezvinhu zviripo, ruzivo rweusipo!
Vol. 1 JUNE, 1905. Nha. 9
Copyright, 1905, neHW PERCIVAL.
ASI shoko rinoreva, "pfuma" ndiyo iyo iri pasi kana inomira pasi. Izvo izvo zvinhu zviri pasi pasi, kana kuti zvinomira pasi, ndizvo zvinoratidzwa zvose.
Izwi rokuti, "mulaprakriti," sezvakashandiswa neAryans yekare, rinotsanangura zvarinoreva kunyange zvakakwana kudarika shoko redu redu. "Mula" zvinoreva mudzi, "Prakriti" chimiro kana nyaya. Mulaprakriti, saka, kuti mavambo kana mudzi kubva kune chimiro kana nyaya inouya. Ndiko mupfungwa iyi kuti tinoshandisa izwi izwi.
Chimwe chinhu chisingagumi uye chinopindirana. Ndiyo mhedzisiro uye mavambo ezviratidzo zvose. Chimwe chinhu chine mukana wokuzvizivisa pachako, uye zvekudaro kuva, kuziva. Chinhu hachisi chinhu, asi mudzi unobva kune imwe nyaya inosvika. Chimwe chinhu hachiratidzi pachena kumanzwi, nokuti mafungiro haagoni kunzwisisa. Asi nekufungisisa pamusoro pacho pfungwa inogona kupinda muhupenyu hwezvinhu uye ikoko inonzwisisa iyo. Izvo zvinonzwisiswa nemanzwi hazvisi izvo, asi zvishoma-zvikamu zvekutsika kwakaderera kubva kune zvinhu, mumasangano avo akasiyana.
Muhupenyu hwose hunoziva nguva dzose. Iyo nguva dzose-inoziva zviri muhupenyu ndiyo kuzviita. Kuzvidavirira ndiko chikonzero chekuratidzwa kwezvinhu kuburikidza nemamwe maitiro. Chinhu chinogara chichifanana, sechinhu, asi chinoshandurwa kuburikidza nekufamba kwepasi rose mumhepo. Nyaya yemweya isomic. Nyaya yemweya ndiyo kutanga kwezvisikwa, nyika, uye varume. Nokuda kwekubatana kwemazwi emweya ekufungidzirwa kunoshandurirwa mune dzimwe nyika kana mamiriro ezvinhu. Izvo chimwe chinhu chinova maviri, uye izvi zviviri zvinowanzovapo munguva yose yekuratidzwa. Kubva pane zvakanyanyisa pakunamata kusvika kune zvakanyanyisa pane zvakaderera pasi payo, ipapo kudzokera ku universal motion.
Nyaya yeMweya inopesana nemisungo miviri isingaparadzanwi, kana mapuranga, inowanikwa mune zviratidzo zvose. Mukutanga kwayo kubvisa kubva mumamiriro ezvinhu emweya kunowanikwa semweya. Yacho yechinomwe inobvisa kunze kana pasi ndiyo nyaya yedu yakaoma. Nyaya ndiyo iyo yezvinhu, iyo inoshandiswa, yakaumbwa, uye yakasimbiswa neimwe iyo pfumo pachayo inonzi mweya. Mudzimu ndiyo iyo yezvinhu zvinokurudzira, inopa simba, uye maumbirwo ayo imwe pfumo pachayo iyo inonzi chinhu.
Muchimiro chayo chekunze kana kuderera icho chakanga chiri chinhu, asi icho chava iko zvino, unofadzwa, uye unopa mazano, mafungiro uye chinangwa, kubva kumadzimambo pasi kusvika kumunhu, nekugadzira maitiro. Kana nyaya yemweya ndiyo yakadaro yakaenzana nayo inozviratidza nekutenderera kwayo, iyo ndiyo inonyanya kuratidzwa kwezvinhu zvakagadzirwa, uye isingafi, inokosha, uye inobva kuna Mwari. Kana, zvakadaro, pfungwa kana kuongorora kwekutsvaga kunokundikana kuenzaniswa uye kunoratidzwa nekuzvimiririra, inowanzoputika kuburikidza nekugara nguva dzenguva dzekuchinja nekushanduka.
Muviri wega wega kana kuti fomu ndiyo motokari inoenda pamusoro payo, uye iyo ndiyo inodzidzisa nheyo kumutumbi kana fomu pasi apa. Kukura kwemweya kunosanganisira kuchinjwa kwezvinhu kubva pasi kusvika kumazinga ekure; chigadziko chimwe nechimwe chiri motokari yekufungidzira kana kutaura kwekuziva. Chakavanzika chekuwana hakusi pakuvaka nekubatanidzwa kune miviri kana mafomu, asi pakukoshesa motokari seyo nzira yekuwana chinhu chekupedzisira chekuedza kose -kuziva.
Nzwisiso haisi iyo yakasiyana yakasiyana nehombodo yevhu kunze kwemuponesi wenyika. Kuziva hakugoni kuchinjwa, nokuti hazvina kuchinja. Asi motokari inoshandiswa kuziva iyo inogona kuchinjwa inogona kuchinjwa. Nokudaro iyo nyaya mumamiriro ayo chaiwo uye maitiro haaizokwanisa kuratidza uye kuratidza chizivo sezvazvingaita chimiro cheBuddha kana Kristu.
Zvikoro zvinouya uye zvichienda semazuva asina nguva isingagumi, kuitira kuti nyaya yacho inogona kushandiswa kubva kune yakajeka uye isina kusimbiswa nyika kusvika kune yakakosha zvikuru yeunyanzvi: kubva kune zviyo zvejecha kana kuti sprite chaiyo, kune ngirozi huru kana pasi rose Mwari asina zita. Chinangwa choga chekugadzirisa kwezvinhu semweya wemufananidzo, uye chekushanduka kwemweya wemhepo kune zvakakosha ndeye: kuwana Consciousness.
The Word Foundation, Inc. | Vabudisi ve Kufunga Nekupedzisira